Toosi Hab-dhaqankaaga, Waa Haddii aad Rabto Nolol Toosan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — February 4, 2020
Faylosoof caan ah ee la yiraahdo Platon wuxuu qeexay ruuxaddu inay tahay siddii fardafuul laba faras wada, Fardafuulka fardaha wadaa waa sawirka caqligeena, waana inuu illaaliyaa in farduhu ay jiho wada aadaan.
“Markii akhlaaqdii luntay waxa aynu maraynaa, heer qofku hadalkii uu subixii lahaa galabtii beeninayo.” – Malcolm X
Hab-dhaqanka bulshada aad ku dhexnooshahay waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa hab-fikirkaaga, garashadaada, hor u socodnimadaada, iyo waxwalbo oo yeelan karo horumar saameyn weyn ku leh noloshaada.
Dhinaca kale hab-dhaqanka bulshada aad ku dhex-nooshahay waxay kugu yeelan kartaa saameyn xun sida garasho-xumo, fadhi kudheragnimo oo wakhtiyadaan dambe saameyn xun ku haayo nolosha bulshadeenna, isxilqaan la’aan iyo inaad garan wayso u jeedooyinka aad u nooshahay.
Waa masuuliyad ku saaran inaad maamusho dhinaca wanaagsan ee horumarka keeni karo, sidoo kale inaad xal waara u hesho waa falsafad ku hortaalo. Waxaana la soconaa inaan nahay bani’aadam ay ku heeraarsan yihiin mushkiladaha nolosha.
Fardaha mid waa madow. Waa sawirka waxa aad ugu jeceshahay, sida lacag badan, awood badan, ma fiicna in faraska madow oo kali go’aamiyo jihada la tagayo.
Faraska labaad waa caddaan. Waa sawirka rabitaankeena, oo in isna uu go’aamiyo kaligii jihada la tagayaa ma wanaagsana. Farda fuulku waa in uu u adkaystaa labada farasba, oo ah jacaylkeena iyo rabitaankeena. Qoraalkaan ku saabsan Platon oo dhameystiran halkaan ka aqriso: https://www.tukesomalism.com/archives/11182
Sidaas awgeed caqabadaha nagu heeraarsan waxay u baahan yihiin inaan u helno xal waara. Laakiin marar badan ayaa dhacda inaad xal u waydo nolosha caqabadaha kaa haysta. Adiga oo kali ma ahan ee dad badan ayay haysataa, waxayna ku xeran tahay qofwalbo iyo waayo aragnimadiisa, kartidiisa iyo fahanka guud ee loogu baahan yahay inuu la yimaado aragtiyo cusub.
Rajonimo ku soo koray
Rayrayn ku soo helay
Rafaad badanna soo maray
Yartu weli ma roogsane
Ragaad kale miyaa jira?
Rabbiyow maxaa haray
Naftu ay rajeysaa?
Gabaygaas waxaa tiriyey Falxado Abraar. Falxado koonka korkiisa cadaab ayay ku martay, rajonimo, jacayl yaraan ku galay ayna calfan weyday oo la dhaafiyey, kufsi haddana la damcay in ninkii kufsaday loo guursho. Ciribxumadii Gartii canjeelku waxay keentay carar iyada oo uur ku yeelatay kufsigii. Iyada oo wiil sidata baa haddana la qafaashay addoon ahaanna loo iibshay Soomaaliya gudaheeda. Dal Carbeed baa lagu addoonsan jirey iyada iyo wiilkeedii, haddana la sii kala iibshay.
Falxado oo nafsadeeda ka sheekeynayso waxay tiri “Waxa aan ahaa gabar yar oo jecel in ay waxyaalo badan nolosha kasii ogaato, gaar ahaan aayahayga. Marna kama gaabsan jirin in aan dareenkayga giis ku cabbiro. Giiskaan yar ee kore qayb Falxado Abraar kamid ah baa ka jawaabtay, waxa ay tiri “dareenkaaga waa in aad cabbirto kuma gafsanid, balse aadane waxa uu ku dambayn doono haddii loo sheegi lahaa koonku sidaan ma ahaadeen” giis ahaanna waxay taas ku tiri “
Runta dunida idilkeed
Rabbi bay u gaar tahay
Raxmaankaa wuxuu yiri
Raxmad lagama quustee
Ciddii maanka riiqdaa
Rogroggiisa sii badi.
Faallo yar oo ku saabsan buuggaan waxaad ka heli kartaa halkaan: https://www.tukesomalism.com/archives/9176
“Furaha farxaddu waa inaad riyo iyo hiigsi yeelato, furaha guushuna waa in aad riyadaada rumayso.” – Xikmada lama yaqaano
Aragtida guud ee ay xambaarsan tahay qoraalkaan ayaa ah fursada aad maanta haysato beri ma haysatid. Xaalad walbo ee aad ku sugan tahay ayaa ah fursad qaali kuu ah, waqtiga kali ee aad ka faa’idaysan karto ayaa ah isla waqtiga aad aqrinayso qoraalkaan.
Dunida maanta wey isbedelay waxwalbo waa la fududeeyey, waxwalbana waxay kuu suurta gal tahay inaad gurigaaga adigoo jooga waxwalbo aad baran karto. Maxaa yeelay aqoonta waa wadada koowaad ee horumarka noloshaada. Tacliinta waxay kor u qaada in garadkaaga horumaro waxay ku xeran tahay tacliin inaad la timaado.
Dadka isku garaad iyo caqli ma ahan balse kawaran adigoo caqli iyo garaadba leh aad wax sii barato soo ma laba-jibaar mayso garashadaada. Haddii aad rabto inaad iska dhisto xagga luuqadaha sida English, Norwejiga iyo afsoomaaligaba waxaad kaheli kartaa Somalism akademi. https://somalism.org/
Somalism waa akademiyad waxbarasho Online ah oo aad waxwalbo ka barani karto adigoo jooga gurigaaga ama goobta shaqadaada. Waxa cajiibka ah ee aad ka helayso akademiyadaan ayaa ah in luuqada afka Norwejiga laguugu baraayo afkaaga hooyo waliba si fiican aad u fahmi karto. Halkaan riix si aad u aragto: https://somalism.org/course/grunnleggende-norskkurs-a1/
Maanta waxaad tahay qof xor ah, kawaran adigoo xornimo sheeganaayo haddii aadan naftaada horumarin wayso, soo dhibaato inteeda la’eg ma ahan? Toosi naftaada, waa haddii aad rabto nolol toosan. Waa walaalkaa Cabdijabaar Sh. Axmed oo ku leh farxad ku noolaaw waligaa.
Tags: Toosi Hab-dhaqankaagaWaa Haddii aad Rabto Nolol Toosan
Next post “Xasan Al-Turaabigii Suudaan iyo Soomaaligii”
Previous post Dibriyada Maxaa Lagu Yarayn Karaa?